ChiGerman, Germany Germany yakafa here? - CHIJERIMANI
« : Kubvumbi 19, 2016, 04:11:06 pm »
Izvi ndizvo zvinonyorwa negehena, hapana ruzivo rwekutsinhana, zvinoita sekunge kuuya kugermany hakubatika, zvobva zvadzimwa kusvika iwe wasvika kugermany, chaizvo iyi germany yapera musocial sense, ini pachangu ndaisakwanisa kujaira Kwemakore maviri, kana kunzwa simba kana chero chimwe chinhu chandisina pano, hapana chinouya kana chinobuda, kana kutsvaga kana kubvunza, vanhu vazhinji havashande, vanobvunza ausbildung kana vakatsvaga basa, vanobvunza mutauro,
Ini ndinofungidzira kuti capitalism iyi yakatipinza kuna babamunini giya sevhiri, haina kupihwa mari zvakadaro kubva kuseri kwemushandi, zvino ndakanzwa pawairesi kuti vachasimudza mudyandigere kusvika pamakore makumi manomwe. Kubva pa70 kusvika 65, ikozvino makumi manomwe, kana rimwe zuva vakadzurwa, tichasiya basa muguva: O.
Pakati pevanhu mamirioni makumi masere neshanu kuGerman, 80.7 muzana parizvino vari pamusoro pemakore makumi matanhatu nemashanu. Iyi inhamba inonakidza, saka usataure kuti sei Germany ichiwana vapoteri vakawanda, usatsamwire mwanasikana wemupristi.
Nenzira, ini ndinoona vazhinji veTurkey vakanganwa chiTurkey, tinombomira tisingazvizive?
Bidet iri pano, shamwari pano dzinoti mubairo wepasi, uyo unotemerwa nehurumende, haawedzere zvachose maererano nemutengo, sezvakaita tr. Ini handina kukwanisa kubvunza, nekuti chiGerman changu chaive chisina kukwana.
Re: Germany yafa here?
« Reply #1: Chivabvu 27, 2016, 10:29:14 pm »
Germany haina munhu akafa achichema. zvakanakira nyika, shanda kusvika makumi manomwe uye ufe 70 vhiki usati waenda pamudyandigere. Kana maGerman vari vanhu verudzi chaizvo vari kudanana nenyika yekumusha kwavo, zvikasadaro munhu haakwanise kutsungirira yakadaro. Ini handizive kuti imitero inoitwa pano, chii chinoitwa munyika medu, pachave nehondo yevagari, nyika ichadurura mumigwagwa.
« Reply #2: Chikumi 01, 2016, 04:21:17 pm »
-> Wareva hama yangu yakanaka. Germany inoshandisa vanhu uye vanoenda pamudyandigere pavanenge vasisa shande. Dai pasina vapoteri nevatorwa, Germany yaisazoguma chete asiwo kupunzika. Asi pane chimwe chinhu chakanaka mumabasa ese. Vagari veGerman vari kuve chiIslam zuva nezuva. Tinofanira kuenderera mberi nekurarama tisina kufanana. Chimwe chezviratidzo zveapocalypse ndechekuti nyika imwe ichave yakazara maMuslim. Zvinotaridza kwandiri kuti ichave iri Germany kana America. Kunyangwe ALLAH achigona kuzviita muJapan. Asi mamiriro azvino anomuratidza. Chaizvoizvo, ini handina kunge ndiri munzvimbo idzi nguva pfupi yadarika. Ini ndachembera kwazvo. Asi ini handina kukanganwa, asi ini ndichiri kukwanisa kufema pano sekufunga kwangu nezvazvo. Chaizvoizvo, ndinoda kuedza kuitira kuti nhaurirano dzekare dzigone kumiswazve.